Heerarka anshaxa | eTurboNews | eTN
Location: Bogga ugu weyn » Heerarka anshaxa
TravelNewsGroup waxaa ka go'an in ay raacdo heerarka anshaxa ugu sarreeya.
Cadaalada iyo saxnaanta, daacadnimada ayaa ka mid ah qiyamka aasaasiga ah.
Dhammaan qorayaasha eTN / tafatirayaasha ayaa dhamaantood si wadajir ah mas'uul uga ah heerarka anshaxa. Shaqaale kasta oo ka warqaba in xubin ka tirsan shaqaalaha uu ku kacay xad-gudub anshaxeed waa inuu isla markiiba arrinta u keenaa tifaftiraha darajada sare leh.
Caddaalad, Saxnaanta iyo Sixitaannada
TravelNewsGroup waxay ku dadaalaysaa inay ku shaqeyso si cadaalad ah, sax ah, iyo madax banaani.
Mar kasta oo ay suurtogal tahay, waxaanu raadinaa aragtiyo iska soo horjeeda oo aanu jawaabo ka dalbanaa kuwa dhaqankooda lagu waydiiyo wararka.
In kasta oo ay mas'uuliyad naga saaran tahay inaan si sax ah u tabino wararka aan naqaanno, iyo sida ugu dhaqsaha badan ka dib markii aan wararka jabinno, waa inaan cusbooneysiinno wixii aan ka heli karno dhinac ka soo horjeeda ama ka badan. Haddii dhinaca ka soo horjeeda la gaari waayo, waa in aan sheegnaa. Waa inaan sidoo kale kobcinnaa ruuxa caddaaladda ee qaabka daboolkayaga. Dhinac ka soo horjeeda waa in aan daruuri laga fileyn in ay si degdeg ah u bixiyaan jawaabo macquul ah oo ka baaraandegaya arrimaha kakan. Horumarinta sheekooyinka waa inay muujiyaan inay ku sii wadi doonaan in lagu cusboonaysiiyo "In ka badan oo iman doona" ama odhaah la mid ah.
Waa inaan ku dadaalno inaan abuurno isku dheelitirnaan dhammaan caynsanaanta oo leh dareen degdeg ah.
Dhammaan khaladaadka waa in si degdeg ah loo qiraa si toos ah, oo aan waligood la qarin ama aan la qarin sheeko la socota. Xaalado naadir ah oo keliya, iyadoo oggolaansho laga helayo Tifaftiraha Fulinta, waa in la isku dayo in laga saaro macluumaadka khaldan (ama macluumaadka si badheedh ah loo daabacay) shabakada. Marka khaladaadka lagu sameeyo khadka, waa in aan saxno khaladaadka oo aan muujino in sheekada la cusbooneysiiyay si loo saxo qaladka ama loo caddeeyo waxa ay leedahay. Had iyo jeer waanu garwaaqsanahay khaladaadkayaga, waxaananu toosinaynaa rikoodhada si hufan.
Marka la tixgalinayo codsiyada xogta saxda ah laga saarayo kaydkeena dadweynaha, waa in aan ka fiirsan kaliya danta qofka ee cabudhinta waxa ku jira, laakiin sidoo kale danta dadwaynaha ee ogaanshaha macluumaadka. Duruufaha ayaa hagi doona go'aanka waana in uu ansixiyo tafatiraha fulinta. Siyaasadayagu maaha inaan ka saarno macluumaadka la daabacay ee kaydkayaga, laakiin waxaanu doonaynaa in kaydiyadu noqdaan kuwo sax ah, dhamaystiran oo cusub, markaa waxaanu cusboonaysiin doonaa oo aanu sixi doonaa macluumaadka la kaydiyay sida loogu baahdo, oo ay ku jiraan cinwaanada.
Cadaynta waa in la sameeyaa marka sheeko, sawir, muuqaal, qoraal, tafatir, iwm. ay abuuraan muuqaal been ah oo xaqiiqda ah.
Marka ay jirto su'aal ah in sixid, caddayn ama ka saarid sheeko ama sawir ay lagama maarmaan tahay, u keen arrinta tifaftiraha.
Saxafiyiinta ama sawir qaadayaashu waa inay isku sheegaan ilaha wararka. Marar dhif ah oo ay xaaladuhu soo jeedinayaan inaan la aqoonsanayn nafteena, Tifaftiraha Fulinta ama tafatiraha sare ee ku habboon waa in lala tashadaa si loo ansixiyo.
Suxufiyiintu waa in aanay been abuur ku samayn, hadday tahay jumlad qoraal ah oo qof kale kor loogu qaadayo, ama haddii ay tahay war-saxaafadeedka oo la daabacayo oo aan loo nisbayn. Saxafiyiinta SCNG ayaa mas'uul ka ah cilmi-baaristooda, si la mid ah iyaga ayaa u xilsaaran warbixintooda. Daabacaadda aan ku talagal ahayn ee shaqo qof kale uma cudur daarato xatooyada. Been-sheeggu waxay keeni doontaa tallaabo anshaxeed oo daran, waxaana ku jiri kara joojinta.
In kasta oo saxafiyiinta laga filayo in ay wararka degdega ah u tebiyaan si gardarro ah, waa in aanay faragelin maamulka madaniga ah marka ay shaqada ku jiraan. Marnaba waa in saxafigu sharciga jabiyo. Saxafiyiinta dareemaya in si sharci darro ah loogu xaddiday shaqadooda ayaa laga filayaa inay isdejiyaan oo ay si xirfad leh u muujiyaan xaaladda oo ay isla markiiba u sheegaan tifaftiraha darajada sare leh.
Guud ahaan, waa inaan iska ilaalinaa adeegsiga ilo aan la magacaabin ee sheekooyinka. Waxaan xogta u nisbeyn doonaa ilo aan la magacaabin kaliya marka qiimaha warku dammaanad qaado oo aan si kale loo heli karin.
Marka aan dooranno inaan ku tiirsanno ilo aan la magacaabin, waxaan ka fogaan doonnaa inaan u oggolaanno inay noqdaan saldhigga keliya ee sheeko kasta. Ma oggolaan doono ilo aan la magacaabin inay sameeyaan weerarro shaqsiyeed. Waa inaan si faahfaahsan ugu qeexnaa isha aan la magacaabin si aan u muujinno kalsoonida isha. Waana in aan akhristayaasha u sheegnaa sababta ay ishadu u codsatay ama magaceeda la qariyay.
Xisaabaadka warbaahinta bulshada waa in si cad loogu calaamadiyaa magaca hay'adda wararka, ha noqoto heer deegaan ama kooxda Wararka Koonfurta California.
Marka ay wararka ka soo baxayaan baraha bulshada waa in qoraalka ugu horreeya laga soo xigtay, wariyuhuna waa inuu caddeeyaa inay goobta joogaan iyo in kale. Haddii aysan goobta joogin, waa inay si cad - oo ku celcelis ah - u keenaan macluumaadka ay ka helayaan dhacdada.
Xigasho had iyo jeer waa inay ahaadaan erayada saxda ah ee qof ku hadlay, marka laga reebo sixid yar oo xagga naxwaha iyo syntax ah. Waalidiinta oraahyada ku jira ayaa ah kuwo aan waligood ku habboonayn oo had iyo jeer waa la iska ilaalin karaa. Ellipses waa in sidoo kale laga fogaado.
Khadadka, khadadka taariikhiga ah iyo khadadka deynta waa inay si sax ah ugu gudbiyaan akhristayaasha isha warbixinta. Dhammaan sheekooyinka, oo ay ku jiraan qoraallada kooban, waa inay lahaadaan khad hoose iyo macluumaadka lagala xiriiri karo qoraaga si akhristayaasha u ogaadaan cidda lala xiriirinayo haddii uu jiro qalad ama arrin.
Saxafiyiinta muuqaalka ah iyo kuwa maamula soo saarista wararka muuqaalka ah ayaa lagula xisaabtamayaa ilaalinta heerarka soo socda ee shaqadooda maalinlaha ah:
Ku dadaal inaad sameyso sawirro si run ah, daacad ah, iyo si dhab ah u soo tebiya. Iska ilaali in lagu maareeyo fursadaha sawir ee la diyaariyay.
Soo saarista sawirada daabacaadda iyo internetka mararka qaarkood waa la aqbali karaa haddii macnaha guud ee bogga daabacan ama shaashada lagu soo daro sheekaduna ay ku saabsan tahay sawirka iyo isticmaalkeeda daabacaadda. Dood-wadaag iyo oggolaansho ayaa loo baahan yahay.
Dadaal kasta ayaa la samayn doonaa si loo ogaado oo loo hoggaansamo siyaasadda fiidiyowga ee goobta aan ka hadlayno ka hor caymiska tooska ah. Haddii siyaasadaha fiidyowga ay mamnuuc yihiin, waa in laga doodo sida loo sii wado caymiska.
Su'aalo? Fadlan la xidhiidh maamulaha-daabacaada/guji halkan